कोहलपुर नगरभित्रका योजनाहरुको अनुगमन तीब्र, अधिकांश मापदण्ड विपरित – Sadarline
शिक्षामा पहुंच बढेपछी पेशा परिवर्तन गर्दै चिडिमार समुदाय
दुईलाख बढीको सुपरपावर नियन्त्रणमा लिई भन्सारमा बुझाईयो
कोहलपुर नगरभित्रका योजनाहरुको अनुगमन तीब्र, अधिकांश मापदण्ड विपरित
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार ०७:२३
९ जेठ, कोहलपुर (बाँके) : कोहलपुर नगरपालिका भित्र चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा सञ्चालनमा रहेका र सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनुगमन तीब्र रुपले गर्न सुरु गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कोहलपुर नगरपालिकामा ४ सय १३ वटा विभिन्न प्रकारका विकासे योजना सञ्चालनमा रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष सकिन करिव १ महिनामात्र बाँकी रहदा कोहलपुर नगरपालिका भित्र हुँदै गरेका र भई सकेका योजनाको गुणस्तर तथा कामको मूल्याङकन गर्नको लागि कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर एवं नगरस्तरिय योजना अनुगमन समिति संयोजक सञ्जुकुमारी चौधरीले अनुगमनलाई तीब्रता दिएको बताईन ।
उनले अनुगमनका क्रममा सम्पन्न भएका र हुँदै गरेका विभिन्न खाले विकासे कामहरु तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नभएको पाईएको बताईन । उनले भनिन्–‘अनुगमनको क्रममा भेटिएको त्रुटीलाई सच्याएर मात्र भुक्तानी दिने निर्देशन दिएकी छु । अनुगमन गरेका अधिकांश योजनाहरु मापदण्ड अनुसारका छैनन् ।’
मंगलबार मात्र उपमेयर सहितको टोलीले कोहलपुर वडानं. १२ को निबुवाचोक खड्कवार हुँदै घुईयावारीसम्मको ४ सय ३२ मिटर लम्बाईको पक्कि सडकको अनुगमन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको सो सडक पक्कि भए पनि काम सन्तोषजनक नभएको अनुगमन टोलिले जनाएको छ ।
त्यस्तै कोहलपुर नगरपालिका वडानं.२ को ३ सय ६० मिटर लम्बाई, ५ मिटर चौडाईको सडक ३४ लाख लागतमा सम्पन्न भएको पक्की सडक, कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ५ को २ सय ८० मिटर लम्बाई, ५ मिटर चौडाई २८ लाख लागतमा सम्पन्न भएको पक्की सडकको अनुगमन गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसारको पाईएकोले यी दुवै सडकको कामको भुक्तानी दिन सकिने संयोजक थारुले बताईन् ।
त्यस्तै वडानं.७ को ७ सय २० मिटर लम्बाई ४.५ मिटर चौडाई सडक ५९ लाख लागतमा सम्पन्न भईरहेको सडकको अनुगमन गरिएको छ । हालसम्म ८० प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी काम समयमै सक्नुपर्ने भन्दै मापदण्ड अनुसार नै निर्माण गर्न सुझाव पनि दिईएको छ ।
कोहलपुर–१२ स्थित सिर्जना सामुदायिक वनमा रहेको भ्यू टावरमा निर्माण गर्न लागिएको पौडी पोखरीको पनि अनुगमन गरिएको छ । ९६ फिट लम्बाई, ४२ फिट चौडाई र ६ फिट गराईमा रहेको सो पोखरीका लागि यो वर्ष २४ लाख बजेट छुट्याईएको थियो पौडी पोखरीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि थप बजेटको आवश्यकता रहेको जनाईएको छ । रामबहादुर रावतको सहयोगमा
गर्मीले नेपालगन्जमा आहात
सदरलाइनडटकम ९ जेठ, नेपालगन्ज : अत्याधिक गर्मीका कारण बाँकेमा बसोबास गर्ने सर्बसाधारणहरुको जनजिवन कष्टकर बनेको छ । सर्वसाधारणहरु गर्मीका कारण आहत बनेका छन् । केही दिनदेखि नेपालगन्ज लगायत आसपासका ठाउँमा अत्याधिक गर्मी चर्किएको पछि सर्बसाधारण मर्कामा परेका हुन । गर्मीका कारण बिद्यार्थी, शिक्षकदेखि काम गर्ने मजदुरहरु सबैभन्दा धेरै समस्यामा परेका […]
२६ श्रावण २०७८, मंगलवार १२:२३
४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १७:४२
सरकार माफियाको घेराबन्दीमा : नेता शर्मा
१२ भाद्र २०७८, शनिबार १४:०८